Ogow sagaal arrimood oo ku saabsan xaqiiqooyinka dayaxa, kuwaa oo aadan horay u ogeyn - BBC News Somali
Ogow sagaal arrimood oo ku saabsan xaqiiqooyinka dayaxa, kuwaa oo aadan horay u ogeyn
Image caption Dayaxa
Dayaxa u muuqda iney godad ku dhex yaallaan, dayaxa midabkiisu buluugga yahay, dayaxa buuxa, dayaxa leh labada af ee fiiqan - waxaa jira waxyaabo cajiib ah oo ku saabsan dayaxa la jecleysto. Waa kuwan xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan dayaxeenna sida fiican noogu ifa habeenkii.
Dayuxu wuxuu u sameysanyahay sida ukunta. Marka aad eegeyso, waxaad runtii arkeysaa mid ka mid ah dhinacyadiisa yar yar ee uu ku dhammaado. Ubucdiisana - oo ah qeybtiisa dhexe kuma aaddana bartamaha, waxay bartanka u jirtaa 1.2 mayl.
Mar walba oo aan eegno waxaan aragnaa boqolkiiba konton iyo sagaal (59%) ka mid ah dayaxa. Boqolkiiba afartan iyo kowda(41%) soo hartayna waligeed lagama arki karo dhulka xaggiisa. Haddii aadan taas rumeysaneyninna, ogow in haddii aad hawada sare tagtid oo aad eegtid qeybta kaa qarsaneyd ee ah 41%, markaas awood uma yeelan doontid inaad aragtid meeraha dhulka!.
Kenya oo Dayax gacmeedkii ugu horreyay samaysanaysa
Erayga 'dayaxa buluugga ah' waxaa la aaminsanyahay in markii ugu horreysay la abuuray sannadkii 1883-kii ka dib markii ay qarxeen buuraha Krakatoa ee dalka Indonesia. Markaas ayuu boor fara badan hawada sare gaaray wuxuuna sababay in markii dayaxa la eego uu u muuqdo mid uu midabkiisu buluug yahay. Sida iska cadna waxay ahayd arrin qeyrul caadi ah oo aan horay u dhici jirin, sidaas awgeedna jumladda ingiriiska ah ee "once in a blue moon" oo micneheedu yahay "hal mar oo uu dayaxu buluug noqdo" waxay muujineysaa in loo adeegsado waxyaabaha dhif iyo naadirka ah.
Mareykanku waxay si dhab ah uga fakarayaan iney hubka nukliyeerka ku qarxiyaan dayaxa. Fikraddaan waxaa lagu caddeyn doonaa quwadda ay leeyihiin milatariga Mareykanka iyo in ay muruqooda ku soo bixiyaan ruushka hortiisa, iyo waliba in lagu handado. Mashruucaas sirta ah waxaa lagu magacaaby 'Duullimaadyo daraasad cilmi baaris ah loogu soo sameynayo dayaxa', ama 'Mashruuca A119'.
5. Qorrax madoobaadka waxaa sababa xayawaan la yiraahdo dragon-ka ee holaca afka ka sii daaya - Khuraafaad
6. Dayaxa wuxuu yareynayaa wareegga dhulka